Nkọwa:Ngwa Nchedo nkwụsị,0-10V Dimming Led Driver,Na-eto eto uhie,Ike nnyefe Ike,,
Home > Ngwaahịa > Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ ọrụ
Ngwaahịa nke Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ ọrụ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ngwa Nchedo nkwụsị , 0-10V Dimming Led Driver suppliers / factory, wholesale high-quality products of Na-eto eto uhie R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
240W Linear Luminaire LED Driver Kpọtụrụ ugbu a
160W IP edepụtara ọkwọ ụgbọala ọhụụ Kpọtụrụ ugbu a
100W Linear High Bay Luminaire IP Rated Driver Kpọtụrụ ugbu a
LED Linear Luminaire Driver AC DC Converter Kpọtụrụ ugbu a
Ntugharị na-enye IP Rated LED Driver wallpack lamps Kpọtụrụ ugbu a
UL Linear High Bay Light LED Driver Kpọtụrụ ugbu a
UL Obere ụgbọala ọhụụ 100W Dali Dimmable Kpọtụrụ ugbu a
160W Mgbaaka na-agba agba 36V LED Drip Power Supply Kpọtụrụ ugbu a
Ọpụpụ Waterproof Strip LED Power Supply Kpọtụrụ ugbu a
DALI Dimmable LED Driver 100W Voltage Constante 24V Kpọtụrụ ugbu a
100W 24V 12V Linear LED Driver Strips Kpọtụrụ ugbu a
Ọkụ Ọkụ n'èzí Kpọtụrụ ugbu a
DIP Ihe mgbapụta na-arụgharị arụgharị ugbu a Kpọtụrụ ugbu a
Ọrụ 347V Ọkwọ ụgbọala Ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
UL Panel Light Driver 347V Kpọtụrụ ugbu a
347V Mpempe akwụkwọ Mpempe Igodo nke Mpempe akwụkwọ 347V Kpọtụrụ ugbu a
347V Linear High Bay Fixtures Driver-Power Supply Kpọtụrụ ugbu a
347V Diana Diri ọnụ Kpọtụrụ ugbu a
IP65 ma ọ bụ IP67 maka mmiri mmiri, ngwaahịa ndị na-adabere n'èzí arụ ọrụ Industrial na nnukwu mmiri n'èzí, na-agafe UL / FCC / TUV / RCM / CB / CE Certified. nwere ike ime mgbagọ 0-10V / PWM / RX. Na obere circuit, n'elu okpomọkụ, na volta protaction. Ịrụ ọrụ arụ, nwere ike iji ya mee ogologo oge.
Voltage ọsọ ọsọ: 100-277vac / 100-347V
mmepụta voltaji: 25-40vdc / 27-42vdc / 35-45vdc / 50-70vdc / 12Vdc / 24vdc / 36V / 48V
Ụdị IP: IP65 / IP67
> = 50000hours, akwụkwọ afọ 5.
Ajụjụ 1: Ị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahịa?
Ajụjụ nke abụọ: Ụgwọ ịkwụ ụgwọ?
Ajụjụ nke 3: Gịnị bụ isi ahịa nke njigide?
Azịza: Nlekọta elele anya maka ndị na-eduzi LED na dimmers na 2010. Anyị nwere ndị engineen 28 bụ ndị raara onwe ha nye nyocha na ịmepụta LED na-achịkwa ma na-agbanwe usoro.
Ajụjụ nke 4: Gịnị ga - eme ma ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu mgbe ị natara ngwaahịa gị?
Azịza: Anyị nyochachara ngwaahịa anyị tupu mbupu. Ozugbo ị nwetara ngwaahịa ị na-enweghi afọ ojuju, biko nweere onwe gị iji kpọtụrụ anyị n'oge, anyị ga-eme ike anyị niile iji dozie nsogbu ọ bụla gị na ọrụ ahịa anyị mgbe emesịchara.
Ngwa Nchedo nkwụsị 0-10V Dimming Led Driver Na-eto eto uhie Ike nnyefe Ike Usoro nkwụsị